ရွှေတိဂုံဘုရား မုဂ်တံခါးက ဗုဒ္ဓဘာသာတို့ရဲ့ သဒ္ဓါတရားများ…. - Store Feeling
ရွှေတိဂုံဘုရား မုဂ်တံခါးက ဗုဒ္ဓဘာသာတို့ရဲ့ သဒ္ဓါတရားများ….
ဘုရားကို ပိတျထားလို့ ရပမေဲ့ သဒ်ဓါတရားကိုတော့ ပိတျထားလို့မရဘူး ရှှတေိဂုံဘုရား မုဂျတံခါးက ဗုဒ်ဓဘာသာတို့ရဲ့ သဒ်ဓါတရားမြား
ရနျကုနျတိုငျးကို မှနျလူမြိုးတို့သညျ ဒဂုံတိုငျးဟု သမုတျခဲ့ကွသညျ။ဒဂုံတိုငျးမှာ တညျထားသော ဘုရားဖွဈသည့ျ အတှကျကွောင့ျ ဒဂုံတိုငျးကဘုရားဟု ခေါျဝေါျပွောဆိုခဲ့ကွသညျ။မှနျဘာသာဖွင့ျ ကြာျလဂုငျ ဟုရေးသားပွီး ကြိုကျလဂုံဟုအသံထှကျဆိုခဲ့ကွသညျ။
တတိယမွနျမာနိုငျငံကို တညျထောငျခဲ့သော အလောငျးမငျးတရားကွီးလကျထကျတှငျ မှနျတို့ကို တိုကျခိုကျအောငျမွငျပွီးနောကျ ဒဂုံကို ရနျကုနျဟု အမညျနာမ ပွောငျးလဲခဲ့သညျ။ ကြိုကျလဂုံကို ကြိုကျဒဂုံဟု ခေါျဆိုကွသညျ။နောကျပိုငျးတှငျ ကြိုကျလဂုံ(သို့) ကြိုကျဒဂုံသညျ မွနျမာပွညျ၏ မူပိုငျသငျ်ကတေ အဖွဈကြောျကွားလာခဲ့သညျ။
မူပိုငျကြိုကျဆိုသော စကားလုံးနရောတှငျ ရှှနေိုငျငံ(Golden land)ကို ကိုယျစားပွုသော ရှှေ ဆိုသော စကားလုံးဖွင့ျ အစားထိုးခဲ့ကွသညျ။ ထို့အတူ လဂုံ လိုလို ဒဂုံလိုလိုဖွဈနသေောစကားလုံးကိုလညျး တိဂုံ ဖွင့ျ အတညျပွုပေးလိုကျကွသညျ။ထိုအခြိနျမှစ၍ ကြိုကျလဂုံ သညျ မွနျမာပွညျတှငျမှာ သာမက ကမ်ဘာ့ တဝှမျးမှာ ရှှတေိဂုံ ဟူသော အမညျနာမဖွင့ျ ခေါျဝေါျခဲ့ကွသညျ။
ဘုရားကို ပိတ်ထားလို့ ရပေမဲ့ သဒ္ဓါတရားကိုတော့ ပိတ်ထားလို့မရဘူး ရွှေတိဂုံဘုရား မုဂ်တံခါးက ဗုဒ္ဓဘာသာတို့ရဲ့ သဒ္ဓါတရားများ
ရန်ကုန်တိုင်းကို မွန်လူမျိုးတို့သည် ဒဂုံတိုင်းဟု သမုတ်ခဲ့ကြသည်။ဒဂုံတိုင်းမှာ တည်ထားသော ဘုရားဖြစ်သည့် အတွက်ကြောင့် ဒဂုံတိုင်းကဘုရားဟု ခေါ်ဝေါ်ပြောဆိုခဲ့ကြသည်။မွန်ဘာသာဖြင့် ကျာ်လဂုင် ဟုရေးသားပြီး ကျိုက်လဂုံဟုအသံထွက်ဆိုခဲ့ကြသည်။
တတိယမြန်မာနိုင်ငံကို တည်ထောင်ခဲ့သော အလောင်းမင်းတရားကြီးလက်ထက်တွင် မွန်တို့ကို တိုက်ခိုက်အောင်မြင်ပြီးနောက် ဒဂုံကို ရန်ကုန်ဟု အမည်နာမ ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ကျိုက်လဂုံကို ကျိုက်ဒဂုံဟု ခေါ်ဆိုကြသည်။နောက်ပိုင်းတွင် ကျိုက်လဂုံ(သို့) ကျိုက်ဒဂုံသည် မြန်မာပြည်၏ မူပိုင်သင်္ကေတ အဖြစ်ကျော်ကြားလာခဲ့သည်။
မူပိုင်ကျိုက်ဆိုသော စကားလုံးနေရာတွင် ရွှေနိုင်ငံ(Golden land)ကို ကိုယ်စားပြုသော ရွှေ ဆိုသော စကားလုံးဖြင့် အစားထိုးခဲ့ကြသည်။ ထို့အတူ လဂုံ လိုလို ဒဂုံလိုလိုဖြစ်နေသောစကားလုံးကိုလည်း တိဂုံ ဖြင့် အတည်ပြုပေးလိုက်ကြသည်။ထိုအချိန်မှစ၍ ကျိုက်လဂုံ သည် မြန်မာပြည်တွင်မှာ သာမက ကမ္ဘာ့ တဝှမ်းမှာ ရွှေတိဂုံ ဟူသော အမည်နာမဖြင့် ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြသည်။